Imisa Waddan Ayaa Heysta Hubka Nuclear-ka, Imisa Xabo Ayaase Taalla Adduunka? | Marsa News
Imisa Waddan Ayaa Heysta Hubka Nuclear-ka, Imisa Xabo Ayaase Taalla Adduunka?
Waxaa jira waddamo badan oo ay ka mid tahay Iiraan, kuwaas oo aan loo oggoleyn inay yeeshaan awoodda nuclear-ka, halka kuwo kalena ay heystaan.
Bambooyinku waxay tamartooda ka helaan atoms-yada oo kala fide ama isu imaade oo si wadajir ah cuf u sameeya. Taasi waa sababta mararka qaar bambaanooyinka nuclear-ka loogu yeero “atomic bomb”.
Image captionMareykanka ayaa tomic bomb ku riday magaalada Hiroshima ee dalka Japan, 6-dii bishii August ee sanadkii 1945-kii
Hubka nuclear-ka wuxuu sii daayaa xaddi aad u farabadan oo shucaac ah – kaas oo ah mid sababi kara waxyeello badan, sidaa darteedna saameyntoodu waxay sii jiri kartaa xitaa marka uu qaraxa dhaco ka dib.
Marka sida guud loo eego, jawaabtu waa inuu sameyn karo qof kasta oo aqoon seynis u leh, farsamadana yaqaan, qalabkana heli kara.
Laakiin marka laga hadlayo in waddamada loo oggol yahay sameysashada hubkan iyo in kale, jawaabta su’aashaas waxay noqonaysaa sheeko dheer.
Waxaa jira wax loogu yeero is-afgaradka xakameynta hubka Nuclear-ka, oo afka qalaad loogu soo gaabiyo (NPT) – kaas oo ah heshiis looga gol-leeyahay in looga hortago faafitaanka hubka nuclear-ka iyo in laga qaado waddamada aan loo oggoleyn.
Image captionDaruuro qiiq iyo holac ah oo ka dhashay bambo nuclear ah oo la qarxiyay
Laakiin waxaa jiray shaki laga qabay inay si qarsoodi ah u sameysaneyso hubka nuclear-ka, arrintaasina waxay keentay in Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, Mareykanka iyo Midowga Yurub ay cunaqabateyno ku soo rogaan sanadkii 2010-kii.
Tani waxay keentay in sanadkii 2015-kii ay heshiis galaan Iiraan iyo waddamada kale ee quwadaha waaweyn, kaas oo ay Iiraan ku saxiixday heshiis dhigaya inay baabi’iso bacriminta nuclear-ka si cunaqabateynta looga qaado, laakiin Madaxweynaha Mareyaknka Donald Trump ayaa heshiiskaas cagta ku dhuftay bishii May ee sanadkii 2018-kii.
Image captionMadaxweynaha Iiraan Hassan Rouhani ayaa horay u sheegay in Iiraan aysan damacsaneyn sameysashada hubka nuclear-ka
Run ahaantii, tirada bambooyinka nuclearka ee dunida taallay waxay ayaa aad hoos u dhacday marka la eego sanadkii 1986-kii oo ay ahayd tirada bambooyinkaasi 70,000, halka maantana ay yihiin 14,000 oo bambo.
Mareyknaka, Ingiriiska iyo Ruushka waxay dhammaantood hoos usii dhigayeen xaddiga ay hubkaas ka heystaan, laakiin waxaa la aaminsan yahay in Shiinaha, Pakistan, Hindiya iyo Kuuriyada Waqooyi ay sameysanayeen bambooyin dheeraad ah, sida uu sheegay ururka seynis-yahannada Mareykanku.
Image captionHoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un, In Kuuriyada Waqooyi ay heysato gantaallo gaari kara Mareykanka
Bishii July ee sanadkii 2017-kii, waxay u muuqatay in dunidu ay hal tallaabo u qaadday sidii looga xoroobi lahaa hubka nuclear-ka, ka dib markii ay in ka badan 100 waddan saxiixeen qaraar ka soo baxay Qaramada Midoobay oo dhigayay in si wada jir ah loo baabi’iyo hubkaas, loona mamnuuco.
Ingiriiska iyo Mareykanka waxay sheegeen in qaraarkaas uuna damaanad qaadi karin amniga dunida, maadaama nuclear-ka uu udub dhexaad u ahaa ilaalinta nabadgalyada caalamka, muddo ka badan 70 sano.
Sidaas awgeed, iyada oo dunida ay ku sii yaraanayaan tirada bambooyinka nuclear-ka, marka loo eego 30 sano ka hor, hadana uma muuqato in wakhti dhow laga xoroobi doono hubkaas ama si buuxda loo baabi’in doono.